NANDRITRA NY Ôktôbra 2020, MISY MAMPITRA ANTSIKA NY “83rd CMEF & 30th ICMD, 2020 Shanghai” HO FANAMPINY.
Booth Isa: 7.1ZA21
Fianakaviana sambatra sy mirindra ity. Betsaka ny zavatra nianarantsika teto, miara-mianatra sy mifanampy isika. Manantena izahay fa afaka hitarina amin'ny faritra maro kokoa ny vokatray, ary avelao ny mpanjifa bebe kokoa handray soa amin'ny vokatray.
KonDak manome serivisy fiatoana tokana momba ny fitaovana fitsaboana rehetra fanarenana!
Miandry anao izahay.